Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ oo Kenya u Qabatay 10 Bilood Gudahood Inay Kaga soo Jawaabto Dacwadda Badda ee Soomaaliya - Hablaha Media Network
Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ oo Kenya u Qabatay 10 Bilood Gudahood Inay Kaga soo Jawaabto Dacwadda Badda ee Soomaaliya
HMN:- Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ,ayaa waqti gaaraya 10 bilood u qabatay dowladda Kenya in ay kaga jawaabto dacwadda dhanka Badda ah ee ay Somaliya ka soo gudbisay.
Maxkamadda ayaa amartay in Kenya ugu dambeyn 18-ka December 2017-ka ay kaga soo jawaabto dacwadda ay Soomaaliya sanadkii 2014-kii u gudbisay Maxkamadda ICJ taas oo Soomaaliya ay ku sheegtay in badeedii Muran la galiyay.
Maxkamadda ayaa 19 September ee sanadkii tegay ee 2016-ka u fariisatay dhageysiga muranka u dhexeeyay labada dal oo la xiriiray soohdin badeedka labada dhinac.
Dhageysigaas ayaa ujeedkiisu ahaa in Maxkamadda ay kiiskan qaadi karto iyo in aysan qaadi karin, taas waxa ay ka dhalatay kadib markii ay Kenya ku dooday in kiiskan ay labada dal maxkamada bannaankeeda ku dhameystaan.
Soomaaliya ayaa ka hortimid in kiiskan labada dal ay banaanka ku dhameystaan, waxaana ay kiiskaas u gudbisay Maxkamadda ICJ si labada dal muranka ka dhaxeeya ay u kala saarto.